ARCHIVE, BANKING, FEATURED, SPECIAL » सिटिजन्स बैंकको कुपन्डोल साखा 'असुरक्षित' भएको प्रमाणित, १७३ तोला सुन बैंकबाटै गायब ! (थप विवरणसहित)
काठमाडौँ- सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको कुपन्डोल साखा असुरक्षित भएको प्रमाणित भएको छ । बैंकबाट करिव १७३ तोला सुन बैंकबाटै गायब भएपछि बैंकको कुपन्डोल साखा असुरक्षित भएको प्रमाणित भएको हो । अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै बैंकको कुपन्डोलस्थित साखाका ब्रान्च मेनेजर रोशन मानन्धरले बैंकबाट सुन हराएको तथ्य पुष्टि गरेसँगै बैंकमा कतिसम्म रिस्क छ र बैंकमा जनताको पैसा पनि सुरक्षित छ त ? भन्ने बहस चल्न थालेका बेला यस्तो प्रमाणित भएको हो ।
'बैंकबाट सुन हराएको कुरा सत्य हो । हामीले आन्तरिक छानविन गरिरहेका छौं । प्रहरीलाई पनि यसबारे खबर गरिसकेका छौं । अव अनुसन्धानले के देखाउँछ, त्यसपछि सबै विवरण आउला ।' अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै साखाका ब्रान्च मेनेजर रोशन मानन्धरले भने ।
अर्थ सरोकार डटकमलाई विशेष स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बैंकबाट झन्डै १७३ तोला सुन हराएको छ । हराएको सुन कर्मचारीनै गायब गरेको भन्ने आशंकासहित अनुसन्धान गरिराखिएको छ ।
यता यस विषयमा बुझ्न हामीले बैंकका सुचना अधिकारीलाई फोन गरेका थियौं । उनको फोन नउठेपछी हामीले एसएमएस मार्फत बैंकबारे आएको सुचनाबारे बुझ्नका लागि फोन गरेको बताएपछि उनले तुरुन्तै फोन अफ गरेर राखेका छन् । यसले घटनालाई झन् रहस्यमय बनाएको छ ।